FCC အနီရောင်အလင်းပြန်လည်သုံးသပ်ကဘာလဲ? - သုံးသပ်ချက်များ
အဓိက > သုံးသပ်ချက်များ > FCC ပြန်လည်သုံးသပ်မှု - ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရမလဲ
FCC ပြန်လည်သုံးသပ်မှု - ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရမလဲ
အောက်မှာအလင်းနီစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရကော်မရှင်အနေနှင့်လျှောက်ထားသူသို့မဟုတ်ဖက်ဒရယ်မှတ်ပုံတင်နံပါတ် (FRN) အရလျှောက်ထားသူတစ် ဦး စီသည်ကော်မရှင်သို့ပေးဆပ်ရန်ကျန်ရှိသောကြွေးမြီများ၌အခွန်ထမ်းတူညီသောအခွန်ထမ်းမှတ်ပုံတင်နံပါတ် (TIN) ကိုအသုံးပြုသောမည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကိုမဆိုစစ်ဆေးရန်အတွက်၎င်း၏မှတ်တမ်းများကိုစစ်ဆေးလိမ့်မည်။07.01.2005
ငါက Craig ပါ။ အစိုးရနှင့်နိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်းသင်တန်းဖြစ်ပါသည်။ ဒီနေ့ငါမီဒီယာအကြောင်းအနည်းငယ်ပြောမယ်။
အထူးသဖြင့်မီဒီယာသည်အစိုးရကိုယ်တိုင်နှင့်မည်ကဲ့သို့ဆက်ဆံသည်၊ အထူးသဖြင့်အစိုးရသည်မီဒီယာအားမည်သို့ထိန်းညှိသည်ဆိုသည်။ အချို့က 'Craig၊ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်အစိုးရကမီဒီယာကိုမထိန်းချုပ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လွတ်လပ်သောအရင်းရှင်အရင်းရှင်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်နေထိုင်သည်။ ထုတ်ဝေခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်လွှင့်ခြင်း၏တစ်ခုတည်းသောမှန်ကန်သောစည်းမျဉ်းကိုစားသုံးသူ Craig အတွက်သာဖြစ်သည်။ '' Clone Right ။ '
Craig: တီဗွီမှာရောသတင်းစာမှာပါမပြောနိုင်တဲ့အရာတွေရှိတာအပြင်၊ သူတို့ဟာအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ (သို့) မမှန်မကန်ဖြစ်ခြင်း၊ မီဒီယာကိုကန့်သတ်ချုပ်နှောင်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုတာကိုသေချာအောင်လုပ်တဲ့အစိုးရအေဂျင်စီအတော်များများရှိတယ်။ သတင်းအချက်အလက်။ လက်ဝဲကိုယ်ပွား: ညာ! Craig: စိတ်အေးလက်အေးပြောတာမဟုတ်ဘူးလား။ ဒါပေမယ့်ခဏစောင့်ပါ။ Clone - မဟုတ်ဘူး။ Craig: အိုးငါမှားသွားပြီလို့ထင်တယ်။
မီဒီယာများ၏ပြည်နယ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးမှုကိုအကျဉ်းချုပ်သုံးသပ်။ စတင်ကြပါစို့။ US မှာရှေးအကျဆုံးမီဒီယာပုံစံကပုံနှိပ်ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကဒါကိုအတော်အသင့်ဆုံးလို့ထင်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့လွတ်လပ်ခွင့်စာနယ်ဇင်းဇာတ်လမ်းကနေစပြီးပထမဆုံးအပြောင်းအလဲကြောင့်စိတ်ပျက်စရာမကောင်းဘူးဆိုတာသတိရပါလိမ့်မယ်။ လွတ်လပ်စွာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခွင့်ကို Bill of Rights တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်း၏ဖန်တီးသူများသည်လွတ်လပ်သောသတင်းစာမရှိလျှင်အမေရိကန်များသည်ကောင်းမွန်သောနိုင်ငံရေးဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရန်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုလျော့နည်းသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းကိုပညာရှင်များကပညာရှိစွာအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။
သူတို့ကနိုင်ငံရေးမကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချကြတယ်။ သင်ရုံဆုံးဖြတ်ချက်တွေအများကြီးလုပ်ပါ။ ဒါကြောင့်သတင်းစာမှာဘာတွေပေါ်ထွက်လာနိုင်၊ မရှိနိုင်တဲ့အစိုးရစည်းမျဉ်းတွေသိပ်မများပါဘူး။
v ။ မင်နီဆိုတာအနီးတွင်အခြေခံအားဖြင့်ကြိုတင်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း၏ပုံစံအတွက်ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုရှိနိုင်ဘူးဟုပြောသည်။ နယူးယောက် Times သတင်းစာ v ၌တည်၏။
ယူအက်စ်အေ၊ ပင်တဂွန်စာတမ်းများအရအစိုးရအနေဖြင့်နိုင်ငံတော်၏လုံခြုံရေးကိုအကြောင်းပြချက် (သို့) ရှက်စရာကောင်းသည့်အကြောင်းအရာများထုတ်ဝေခြင်းကိုတားဆီးရန်အကြောင်းပြချက်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ခက်ခဲစေသည်။ တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်မိမိတို့မနှစ်သက်သောအရာများကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်အတွက်သတင်းစာများနှင့်မဂ္ဂဇင်းများကိုတရားစွဲဆိုခွင့်ပြုထားသည့်အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာဥပဒေများရှိနေသေးသည်။ သို့သော်အများပြည်သူဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ New York Times တရားရုံးချုပ်မှ Sullivan အားတရားရုံးမှဆုံးဖြတ်ချက်အားစာနယ်ဇင်းများအားအသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုမှုအားဆင်ဆာဖြတ်ရန်ခက်ခဲစေသည်။
ဒါကြောင့်ငါပြည်သူ့ကိန်းဂဏန်းများနှင့်ပတ်သက်။ လိုချင်တာတွေကိုပြောနိုင်ပါတယ်။ အများပြည်သူကိန်းဂဏန်းများမိုက်မဲဖြစ်ကြသည်။ ဤတရားစွဲဆိုမှုအမျိုးအစားကိုအနိုင်ရရှိရန်အတွက်တရားလိုသည်ဆောင်းပါး (သို့) ကြော်ငြာနှစ်မျိုးလုံးသည်မမှန်ကန်ကြောင်းနှင့်အမှန်တကယ်မမှန်မကန်ပြောဆိုခြင်းနှင့်အမှန်တရားကိုမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းဖြင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
လက်တွေ့တွင်ဆိုလိုသည်မှာပထမပြောင်းလဲမှုကပုံနှိပ်မီဒီယာအားအစိုးရစည်းမျဉ်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ဇာတ်လမ်းတွဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့ရသည့်အတိုင်းပုံနှိပ်သတင်းရင်းမြစ်များမှ၎င်းတို့၏သတင်းအချက်အလက်များကိုယူဆောင်လာသည့်အမေရိကန်လူမျိုးအရေအတွက်ကျဆင်းလာသည်။ ဒီတော့စျေးကွက်အားလုံးကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာတာပဲ။
ငါထင်တာကတော့လူတွေဟာသူတို့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုထိန်းညှိဖို့သတင်းစာတွေ ၀ ယ်ကြတယ်။ သူတို့ကသတင်းစာတွေကသူတို့အိမ်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေချင်တာမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူး၊ ပြီးတော့သူတို့ကသူတို့မင်ကိုသူတို့လက်ထဲမှာမလိုချင်ကြဘူး၊ အစိုးရသည်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရေဒီယိုတွင်ပိုမိုကြီးမားသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်၊
အသံလွှင့်မီဒီယာများသည်တင်းကြပ်စွာစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသောသတင်းအချက်အလက်များဖြစ်သည်။ အစိုးရနှင့်ထုတ်လွှင့်သောမီဒီယာအားအစိုးရမှထိန်းချုပ်သောပထမနှင့်အနည်းဆုံးပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရန်မှာလိုင်စင်ဖြင့်ဆောင်ရွက်သောအီသာထိန်းချုပ်မှုဖြစ်သည်။ Broadcast spectrum သည်အကန့်အသတ်ရှိသောသယံဇာတတစ်ခုဖြစ်ပြီးအများပြည်သူအားနည်းပညာအရပိုင်ဆိုင်သည်။
ဒါကြောင့်မင်းကထုတ်လွှင့်ချင်ရင်ဖက်ဒရယ်အစိုးရဆီကလိုင်စင်တစ်ခုဝယ်ဖို့လိုတယ်။ ၎င်းသည်သင်၏ရုပ်မြင်သံကြားသို့မဟုတ်ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနကိုသတ်မှတ်ထားသောတိကျသောအခြေအနေများအောက်တွင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဤလိုင်စင်များကိုငါးနှစ်တစ်ကြိမ်သက်တမ်းတိုးရန်လိုပြီးအမြဲတမ်းလိုလိုပင်ဖြစ်သည်။
လိုင်စင်များကိုလိုင်စင်ချထားပြီးရုပ်သံလွှင့်သူများအားပြည်နယ်စည်းမျဉ်းဥပဒေအများစုကို FCC မှ Federal Communication Commission မှအုပ်ချုပ်သည်။ ၎င်းသည်ဖရိုဖရဲရေဒီယိုလုပ်ငန်းကိုကြီးကြပ်ရန် ၁၉၃၄ တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးမကြာမီရုပ်မြင်သံကြားစက်အထိတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ FCC သည်၎င်း၏လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအရအများပြည်သူအကျိုးစီးပွားအတွက်လုပ်ဆောင်နေကြောင်းပြသရန်လိုင်စင်ချထားပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။
နိုင်ငံရေးအရ၊ ဆိုလိုသည်မှာ FCC သည်ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှုအတွက်စည်းမျဉ်းအချို့ချမှတ်ခဲ့သည်။ channel တစ်ခုချင်းစီတွင် CSI တစ်ခုရှိရမည်။ ၁၉၄၉ မှပထမဆုံးအုပ်ချုပ်မှုကို Fairness Doctrine ဟုခေါ်သည်။
တစ်နေ့ကိုကယ်လိုရီ ၅၀၀ ဖြတ်နည်း
အများပြည်သူဆိုင်ရာပြissueနာတစ်ခုစီတွင်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုစီကိုအချိန်နှင့်အမျှပေးရန်ထုတ်လွှင့်သူများအနေဖြင့်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ အသံလွှင့်သူကစစ်ပွဲကိုဝေဖန်သည့်အစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်လျှင်၊ ဗီယက်နမ်သို့မဟုတ်အီရတ်မှအစီအစဉ်များကိုထုတ်လွှင့်လျှင်၎င်းသည်စစ်ကိုထောက်ခံသည့်ထပ်တူအစီအစဉ်အတိုင်းထုတ်လွှင့်ရမည်။ လက်တွေ့တွင်ဆိုလိုသည်မှာမျှတသောအယူဝါဒကိုတင်းကြပ်စွာလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းမရှိသော်လည်း၊
ဘက်လိုက်မှုကင်းမဲ့ခြင်းနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်အငြင်းပွားဖွယ်မရှိသောကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှု၏သဘောသဘာဝအရရော်နယ်ရေဂင်အုပ်ချုပ်မှုသည်တရားမျှတမှုအယူဝါဒကိုဖျက်သိမ်းရန်မတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါ။ uh-uh 'နှင့်ဥပဒေပြဌာန်း vetoed ။ ရလဒ်အနေဖြင့်မျှတမှုအယူဝါဒသည်သေသကဲ့သို့ကောင်းသည်။
တရားမျှတမှုအယူဝါဒနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမှာ Equal Time Rule ပါ ၀ င်ပြီး၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအားနိုင်ငံရေးအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များအားအချိန်ပေးသည့်အခါထုတ်လွှင့်သူများကိုခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမပြုရ၊ ထုတ်လွှင့်သည် သို့သော်ဤစည်းမျဉ်းများသည်လင်းယုန်များနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ အင်း၊
မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်သောအခြားအရေးကြီးသော FCC စည်းမျဉ်းရှိသည်။ သို့သော်လည်း FCC သည်ကျွန်ုပ်မပြောနိုင်သောကြောင့်နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်ပြောမည်။ FCC သည်မည်သည့်ထုတ်လွှင့်နိုင်သည်ကိုလည်းထိန်းချုပ်သည်။ သို့သော်ဤစည်းမျဉ်းများသည်ရေဒီယိုသို့မဟုတ်ရုပ်မြင်သံကြားများတွင်ပေါ်လာသောညစ်ညူးခြင်း၊ လူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးရှိသောတန်ဖိုးရှိသောလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောကြားခွင့်ကိုငြင်းပယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြစ်ပေါ်နေသောကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင် FCC ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်ဒဏ်ငွေများသည်တရားရုံးချုပ်၏အမှုများဖြစ်လာသည်။
ဒီကိစ္စမှာအကျော်ကြားဆုံးဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ FCC v Pacifica Broadcasting ကလူရွှင်တော်ဂျော့ခ်ျကာလင်ရဲ့ SevenWords လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုကိုင်တွယ်ခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Crash Course သည်မိသားစုအတွက်ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်သောရုပ်သံလိုင်းဖြစ်သည်၊ ည ၁၀း၀၀ မတိုင်မီတွင်၊
FCC သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလုံခြုံပြီးသီလစောင့်ရှောက်ရန်အတွက် F-bombs နှင့်ဗီရိုအမှားများကိုလည်းဒဏ်ရိုက်သည်။ ဒီ FCC စည်းမျဉ်းတွေဟာထုတ်လွှင့်တဲ့မီဒီယာနဲ့အခြေခံကေဘယ်လိုင်းအများစုအတွက်သာသက်ဆိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် Game of Thrones မှာအဝတ်အချည်းစည်းရှိသူတွေများတယ်။ ဒါဟုတ်မဟုတ်ငါမသိဘူး၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုသူတို့လုပ်နိုင်တယ်။
ကွန်ဂရက်သည် ၁၉၉၆ ခုနှစ်တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးအက်ဥပဒေနှင့်အညီကြိုးပမ်းခဲ့သည့်နည်းတူဥပဒေအားဖြင့်လည်းထုတ်လွှင့်သူများအားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများချမှတ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ ဤလုပ်ရပ်သည်အင်တာနက်ကိုထိန်းညှိရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သောကြောင့်ဤအပြုအမူသည်လူသိအများဆုံးဖြစ်သော်လည်းအခြားသောစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအကျိုးဆက်များလည်းရှိသည်။ ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်၏ဥပဒေများကဲ့သို့ပင်၊ ဤဥပဒေကိုတရားရုံးချုပ်ကတရားစီရင်ရေးကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်။
တရားရုံးမှအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ရန်ရည်ရွယ်သည့်ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်အက်ဥပဒေ (Title V) ၏အပိုင်းကိုပယ်ဖျက်လိုက်သည်။ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်သည့်မီဒီယာများနှင့်မတူဘဲအင်တာနက်အကြောင်းပြောရလျှင်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကွန်ဂရက်ကလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေသည်ကိုသဘောပေါက်သောကြောင့်ဥပဒေနှင့်စည်းမျဉ်းအများစုသည်အပြီးသတ်သည့်အချိန်တွင်ခေတ်နောက်ကျသွားလိမ့်မည်။
သို့သော်ထိုအရာကသူမကိုမကြိုးစားနိုင်အောင်တားဆီးနိုင်ခဲ့သည်။ ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်အက်ဥပဒေကိုတရားရုံးမှဖျက်သိမ်းပြီးနောက်ကွန်ဂရက်ကကလေးသူငယ်အွန်လိုင်းအကာအကွယ်ပေးရေးအက်ဥပဒေကို ၁၉၉၈ တွင်ထပ်မံစစ်ဆေးခဲ့ပြီးသူတို့ကျရှုံးခဲ့သည်။ ၎င်းကိုတရားရုံးချုပ်သို့မတင်သော်လည်း ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်ဖက်ဒရယ်တရားရုံးများကအစိုးရအား၎င်းအားပြenfor္ဌာန်းရန်တားမြစ်ခဲ့သည်။
အထူးသဖြင့်ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နှင့်ဆိုင်သောတရားစွဲဆိုမှုများမှတဆင့်အင်တာနက်ကိုထိန်းညှိရန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ IP စီးရီးများကိုကြည့်ရှုသူများသိသည့်အတိုင်း၎င်းသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးသော်လည်း၊ အခြေခံအားဖြင့်လူများသည်အင်တာနက်ကိုကန့်သတ်ရန်တရားရုံးများကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤဥပမာ၏ဥပမာကောင်းတစ်ခုမှာ Napster ကိစ္စဖြစ်သည်။ တရားရုံးသည်ဖိုင်မျှဝေသည့်ကုမ္ပဏီကိုတရားစွဲဆိုပြီးတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
၎င်းသည်တစ် ဦး ချင်း၊ Metallica နှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းများကိုထိုတရားစွဲဆိုမှုများယူဆောင်လာရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့ကိုအစိုးရ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ရန်အင်တာနက်ကိုသူတို့၏အကျိုးစီးပွားနှင့်ကိုက်ညီစေရန်ပုံသွင်းရန်အစိုးရကိုအသုံးပြုနေသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောရမည်ဆိုလျှင်ဤသည်မှာအင်တာနက်၊ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်သတင်းစာများနှင့်ပတ်သက်သောအလွန်ရှုပ်ထွေးသည့်စည်းမျဉ်းဥပဒေပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းရန်နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပထမအချက်သည်မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
ကျနော်တို့အတွေးပူဖောင်းထံသို့လာကြ၏။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်ဆက်သွယ်ရေးအက်ဥပဒေ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည့်ခေါင်းစဉ် III သည်ကေဘယ်လ်တီဗီ၏စည်းမျဉ်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ စင်စစ်အားဖြင့်၎င်းသည်ကေဘယ်လ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားသည်။ သတင်းစာများနှင့်ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများကိုပိုင်ဆိုင်သည့်ကုမ္ပဏီများကိုကေဘယ်ကုမ္ပဏီများပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပြုသည်။
ဤအပြန်အလှန်ပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံသည်ကေဘယ်ကြိုးလုပ်ငန်းသို့ ၀ င်ရောက်ရန်အတားအဆီးများကိုလျှော့ချရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ပြီး ၂၀၀၃ FCC ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အရကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းကိုစျေးကွက်တစ်ခုတည်းတွင် ဦး ဆောင်သတင်းစာ၊ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ကေဘယ်လ်ကုမ္ပဏီများကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ဒါကကုမ္ပဏီတွေများများလာလာတာနဲ့အမျှမီဒီယာလက်ဝါးကြီးအုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာစေတယ် ထိုသို့ငြင်းဆိုရန်ခက်ခဲသည်။
ရလဒ်အနေဖြင့်လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၃၀ အတွင်းမီဒီယာအကြောင်းအရာနှင့်အသုံးပြုခွင့်ပေးသည့်ကုမ္ပဏီအရေအတွက်သည်သိသိသာသာကျဆင်းသွားပြီး FCC နှင့်ကွန်ဂရက်တို့ကမီဒီယာပေါင်းစည်းမှုကိုအနီးကပ်စစ်ဆေးနေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဝေဖန်သူများကမူထိုသို့သောအပိုဖြုန်းတီးခြင်းသည်မီဒီယာမတူကွဲပြားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟုထောက်ပြသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အစီရင်ခံခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖြစ်အပျက်များတွင်ကိုယ်စားပြုသောရှုထောင့်များနည်းစေနိုင်သည်။
ကွန်ရက်ကြားနေရေးဆိုတာကလည်းကြီးမားတဲ့ပြwasနာပါ။ FCC သည်အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအားသူတို့၏ bandwidth ကိုအသုံးပြုသောကုမ္ပဏီများအားအခွန်အခအမျိုးမျိုးကောက်ခံခွင့်ပြုသည့်စည်းမျဉ်းများကိုပြshould္ဌာန်းသင့်သလားဟူသောမေးခွန်းပေါ်ပေါက်လာသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင် Netflix ကဲ့သို့သောကြီးမားသောကုမ္ပဏီများအတွက်သေးငယ်သည့်ပြိုင်ဘက်များသို့မဟုတ်မပေးရသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်း၏ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်ပိုမိုမြန်ဆန်သောသို့မဟုတ်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရောင်းချကြသည်။
Thought Bubble ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကွန်ရက်ကြားနေရေးဝါဒသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးသောစည်းမျဉ်းဥပဒေပြisနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ကွန်ဂရက်၊ ရုပ်မြင်သံကြား၊ အင်တာနက်ပေါ်တွင်နှင့် FCC ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်မည်သူမဆိုအဆိုပြုထားသောစည်းမျဉ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အများပြည်သူမှတ်ချက်ပေးရန်ခွင့်ပြုထားသောထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများရှိနေသည်။ အစိုးရမီဒီယာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေသောအဓိကပြissuesနာများစွာကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပြီးမှတ်သားဖွယ်ရာပြောဆိုမှုများဖြစ်သည် ပထမ ဦး စွာ၊ မီဒီယာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်သရုပ်ဆောင်သူများစွာပါ ၀ င်ကြောင်းပြသသည်။
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဂျော့ကလူနီ။ အဘယ်သူမျှမမျှမမျှထိုကဲ့သို့သောသရုပ်ဆောင်မျိုး။ ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာကုမ္ပဏီများ၊ မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများကိုယ်တိုင်နှင့် FCC ကဲ့သို့သောအမှုဆောင်အေဂျင်စီများ။
ကွန်ဂရက်ကကျယ်ပြန့်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖွဲ့စည်းပုံကိုကွန်ဂရက်ကတည်ဆောက်သည်ဟုလည်းအကြံပြုထားသည်။ သို့သော်အဓိကကျသောသူများမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဌာန၏အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။ ထိုအဂျော့ကလူနီ။ သူအရမ်းအသက်ကြီးတယ်။
ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာငြင်းခုံမှုနောက်ကွယ်ရှိမေးခွန်းများဖြစ်သည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုစဉ်းစားသောအခါအကြောင်းအရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသို့မဟုတ်ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားသည်။ သို့သော် FCC ၏ပိုင်ဆိုင်မှုစည်းမျဉ်းများကဲ့သို့ကွန်ရက်ကြားနေရေးဝါဒသည်ဆက်သွယ်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်စျေးနှုန်းတစ်ခုတွင်မီဒီယာမည်မျှရရှိနိုင်ကြောင်းတို့ဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ကိုအများသုံးပစ္စည်းအဖြစ်သတ်မှတ်သင့်သည်၊ ငြင်းဆိုသူများသည်အခြားစျေးကွက်ကို ဦး တည်သည့်ကုမ္ပဏီများမဟုတ်ဘဲတစ်ခုခုကိုတက်လာလိမ့်မည်။
မီဒီယာသည်အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကွဲပြားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုဆောင်ရွက်သောကြောင့်ပထမပြင်ဆင်ချက်တွင်စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်ရေးသားသည့်အခါဒီဇိုင်နာများကအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ ခိုင်မာတဲ့သတင်းမီဒီယာမရှိရင်အမေရိကန်တွေဟာသူတို့ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံရေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဖို့လိုတဲ့အချက်အလက်တွေကိုလက်လှမ်းမီနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိတဲ့ ၀ င်ခွင့်အားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ဟာပိုပြီးသာယာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး။
အမြင်အာရုံအနည်းငယ်ကိုနားထောင်ခြင်းထက်အမြင်အာရုံသည် ပို၍ ကောင်းသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုကိုသံသယဝင်ကြပြီးလူအများအပြားကအင်တာနက်ကိုတတ်နိုင်သမျှပွင့်လင်းစွာထားရှိစေလိုကြသည်။ စောင့်ကြည့်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ နောက်တစ်ခါထပ်တွေ့မယ် Crash Course Government and Politics ကို PBS Digital Studios နှင့် ပူးပေါင်း၍ ထုတ်လုပ်သည်။
အမေရိကန်အစိုးရ၏လေယာဉ်ပျက်ကျမှုလမ်းကြောင်းကို Voqal မှထောက်ပံ့သည်။ Voqal သည်လူမှုရေးဆိုင်ရာတရားမျှတမှုကိုမြှင့်တင်ရန်နည်းပညာနှင့်မီဒီယာကိုအသုံးပြုသောအကျိုးအမြတ်မယူသောသူများကိုထောက်ပံ့သည်။ voqal.org တွင်သူတို့၏ရည်မှန်းချက်နှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Crash Course သည်ဤကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလှသည့်လူမိုက်များ၏အကူအညီဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ဤသည်ကဲ့ရဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ဆက်သွားငါ့ကိုတရားစွဲဆိုဖို့ကြိုးစားပါ
Richmond san rafael တံတားစက်ဘီးလမ်းသွား
အဆိုပါဆက်သွယ်ရေးအက်ဥပဒေတားမြစ်သည်FCCမှဆင်ဆာဖြတ်ခြင်းကိစ္စရပ်များတွင်ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊လိုလိမ့်မည်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ကိုနှောက်ယှက်သည်။6A.M. အကြား နှင့် 10 P.M. (ကလေးများကြည့်ကောင်းမြင်နိုင်မည့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါက) မစင်ကြယ်သောပစ္စည်းများထုတ်လွှင့်ခြင်းကိုတားမြစ်သည်FCCစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ။
Mr. Beat သည်တရားရုံးချုပ်အကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ပြသည်။ 'အကယ်၍ သင်လိုချင်လျှင်ပြောနိုင်သည့်စကားလုံးများစွာရှိသည်။ ' အဆုတ်ရောင် '' ကိုသင်သိပြီးဖြစ်သည်။ ငရဲ၊ “ ပြောစရာစကားမရှိဘူး၊ ပြproblemနာမရှိဘူး။
အတ္ထုပ္ပတ္တိ!” မြေမျက်နှာသွင်ပြင်ကိုဆူညံသံအော်ဟစ်သောကြောင့်မည်သူမျှထောင်ချခြင်းမခံရပါ။ ဒါပေမယ့်ထောင်ထဲမှာသွားဖို့စကားလုံးတချို့ရှိတယ်။ နယူးယောက်မြို့၊ အောက်တိုဘာလ ၃၀၊ ၁၉၇၃ ပစိဖိတ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှပိုင်ဆိုင်သောရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနတစ်ခုသည်ဂျော့ခ်ျကာလင်၏ monologue 'ညစ်ညမ်းသောစကားများ' ကိုထုတ်လွှင့်သည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေဆုံးသောညစ်ညူးသောစကားခုနစ်လုံးကိုသူကြေညာခဲ့သည့်သင်သိပါသလော။ ကောင်းပြီ၊ ၁၅ နှစ်အရွယ်သားကိုမောင်းနှင်ခဲ့သောဂျွန်ဒေါက်ဂလပ်စ်အမည်ရှိအမျိုးသားတစ် ဦး သည်အသံလွှင့်နေစဉ်အတွင်းသူ၏ကားရေဒီယိုကိုဖွင့်လိုက်သည်နှင့်ဒေါက်ဂလပ်သည်သဘာဝကျ။ စိတ်ဆိုးခဲ့သည်။
သူကဖက်ဒရယ်ဆက်သွယ်ရေးကော်မရှင်သို့မဟုတ် FCC (Eminem က 'FCC ကငါဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူး') သီဆိုသည်) ထုတ်လွှင့်သူသည်သူ့ကလေးနှင့်မသင့်လျော်သောအရာတစ်ခုခုကိုကစားခဲ့သည်ဟုတိုင်တန်းခဲ့သည်။ FCC မှတွေ့ရှိချက်အရ Carlin ကအချို့သောစကားလုံးများသည် 'လိင်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပပျောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ' ကိုပုံဖော်ခြင်းကိုပြသခဲ့ပြီး၊ ပရိသတ်တွင်ကလေးများရှိနေသောအခါရေဒီယိုကမွန်းလွဲပိုင်းတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ FCC သည် Pacifica ဖောင်ဒေးရှင်းအားကျိန်စာစာရေးခဲ့သည်။ ပစိဖိတ်ကရေဒီယိုမှာညစ်ညမ်းတဲ့ဘာသာစကားနဲ့အမေရိကန်ကုဒ်ကိုဖောက်ဖျက်ခဲ့တယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။
သို့သော် Pacifica သည် 'ကျွန်ုပ်တို့သည်မညီကြောင်းပြောဆိုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောပညာရေးဆိုင်ရာပြပွဲတွင်၎င်းကိုကစားခဲ့သည်' ကဲ့သို့ 'နားထောင်သူများအားမလျောက်ပတ်ကြောင်းထုတ်လွှင့်ခြင်းမပြုမီသတိပေးခဲ့သည်။ ' Pacifica သည် FCC အား Pacifica သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကိုအရေးယူရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း FCC သိရန်ကြိုးစားသည်။ အယူခံဝင်မှုများက FCC ၏တရားစွဲဆိုမှုကိုမမျှတသောဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်သည်။
၁၉၇၇၊ အောက်တိုဘာ ၇ ရက်တွင် FCC သည်တရားရုံးချုပ်သို့အယူခံဝင်ခဲ့ပြီး၊ ၁၉၇၈ ခုနှစ်၊ Aprilပြီလတွင်တရားရုံးမှ 'ညစ်ညမ်းသော' အငြင်းပွားမှုများကိုကြားနာစစ်ဆေးရန်သဘောတူခဲ့သည်။ ဟုတ်တာပေါ့? အစဉ်မပြတ်ငါကသူတို့ကထင်ခဲ့တယ်။
ဒါဆိုမေးခွန်းပေါ်လာတယ်။ FCC ကညစ်ပတ်ပေမဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုထိန်းညှိနိုင်သလား။ ပြီးနောက်၊ မစင်ကြယ်သောမှတ်ချက်များကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပထမပြင်ဆင်ချက်ဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။ တရားရုံးကအဟုတ်ကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ် ၁၉၇၈၊ ဇူလိုင် ၃ ရက်တွင်တရားရုံးက FCC နှင့်ပူးပေါင်းမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
တရားရုံးက Carlin ၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သည်ညစ်ညမ်းမှုမရှိသော်လည်းညစ်ညမ်းမှုမရှိဟုဆိုကာ FCC သည်သူမအားရေဒီယိုတွင်ဆင်ဆာ လုပ်၍ ကလေးများအားမသင့်လျော်သောပစ္စည်းများမှကာကွယ်ရန်နှင့်တိုက်ခန်းသို့မသွားလိုသောမှတ်ချက်များမရှိစေရန်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ တရားရုံးက FCC သည်ကလေးများပရိသတ်ထဲရောက်နေနိုင်သည့်နာရီများအတွင်းမလျောက်ပတ်သောအစီအစဉ်များကိုထုတ်လွှင့်နိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ တရားမျှတမှုဂျွန်ပေါလ်စတီဗင်ကပထမပြင်ဆင်ချက်သည်ရေဒီယိုတွင်ကာလင်း၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုမကာကွယ်ပေးကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဖော်ပြမှုနည်းလမ်းတိုင်းတွင်အထူးပထမပြင်ဆင်ချက်ပါရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ကြာမြင့်စွာကတည်းကအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ ပြနာများ။
နှင့်ဆက်သွယ်ရေးပုံစံအားလုံး၏, ကအနည်းဆုံးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပထမ ဦး ဆုံးပြင်ဆင်ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးခံစားကြောင်းထုတ်လွှင့်သည်။ “ ပစိဖိတ်ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့်ဖက်ဒရယ်ဆက်သွယ်ရေးကော်မရှင်ကအစိုးရသည်မကောင်းသောစကားများကိုဝေဟင်မှအပြစ်ပေးရန်အာဏာကိုပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်သူများအားအေးခဲစေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့် FCC ကို၎င်းသည်အာဏာပေးခဲ့သည်။
ဝေဖန်သူများကပြောကြားသည်မှာ၎င်းသည်မလိုအပ်သောဆင်ဆာလုပ်ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဂျော့ချ်ကားလ်သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်၊ သို့သော်ယနေ့သူ၏အမွေမှာကြီးမားသည်။ လူရွှင်တော်အတော်များများသည်ကာလင်းအားသြဇာလွှမ်းမိုးမှုတစ်ခုအဖြစ်ရည်ညွှန်းပြီးသူသည်အချိန်တိုင်းတွင်လူကြိုက်အများဆုံးလူရွှင်တော်များထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
လူကြိုက်အများဆုံးမဟုတ်သောအချက်မှာနောက်ဆုံးတွင် Carlin ၏ 'ညစ်ပတ်သောစကားလုံး ၇ လုံး' ကိုပိတ်ပင်ခဲ့သောတရားရုံးအမှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အမေရိကန်သမိုင်းတွင်အငြင်းပွားဖွယ်အမြင့်မားဆုံးတရားရုံးချုပ်၏အမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ လာမယ့်တရားရုံးချုပ်၊ ဂျူရီမှာတွေ့မယ်။ တရားရုံးချုပ်အမှု၊
Patreon ၌ဆက်လက်ထောက်ပံ့မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒီကိစ္စကိုသင်ဘယ်လိုခံစားရသလဲ တရားရုံးနှင့်သင်သဘောတူပါသလား၊ ယေဘုယျအားဖြင့်ဆင်ဆာလုပ်ခြင်းအပေါ်သင်မည်သို့ခံစားရသနည်း။ ငါ့ကိုအောက်ကမှတ်ချက်များအတွက်သိပါစေ။
အွန်လိုင်း - ဤအရာသည်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်ပေးဆောင်နှစ်စဉ်စည်းမျဉ်းအခကြေးငွေကနေထူးချွန်ဥပဒေကြမ်းများFCCသို့မဟုတ်လျှောက်လွှာအခကြေးငွေအီလက်ထရောနစ်တင်သွင်း application များအတွက်။ပေးဆောင်ဘဏ်အကောင့်မှခရက်ဒစ်ကဒ်သို့မဟုတ် debit ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။FCCForm 159 - ဤပုံစံကိုစာဖြင့်ပို့နိုင်သည်ပေးဆောင်မည်သည့်အမျိုးအစားမဆိုFCC အခကြေးငွေခရက်ဒစ်ကဒ်သို့မဟုတ်ဝါယာကြိုးလွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့်။
လျှောက်လွှာတင်သည့် နေ့မှစ၍ နေ့တိုင်းဤအရာကိုသင်မြင်တွေ့နိုင်သည်ဟုတ်တယ်FCC ကအားဖြင့်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ လျှောက်လွှာ IFISဤအခြေအနေ ၁၀ ခုအတွက်ပြက္ခဒိန်ရက် ၁၀ ရက်အတွက်သင်၏လျှောက်လွှာကိုဖျက်သိမ်းပြီးပြန်လည်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ မင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လုပ်တယ်ဒါမလိုချင်ဘူး02/17/2012
ဒီနေ့ဆောင်းပါးမှာတော့အနီရောင်ကုထုံးနဲ့ငါ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကျော်ကကြည့်နေတယ်။ အနီရောင်ကုထုံးဆိုသည်မှာ psoriasis ကဲ့သို့အရေပြားအခြေအနေများကိုကုသရန်၊ အရေးအကြောင်းများကိုလျှော့ချရန်၊ ကြွက်သားသစ်များပြန်လည်ထူထောင်ရန်နှင့်ပိုမိုသောအရာများပြုလုပ်ရန်လှိုင်းအလျားအလိုက်သတ်မှတ်ထားသောအလင်းရောင်ကိုအသုံးပြုပြီးကုသမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်တွေ့လေ့လာမှုများထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဖွငျ့ဖွင့်။ ဒီနေ့ဆောင်းပါးမှာအနီရောင်ကုထုံးဆိုတာဘာလဲ၊ အကျိုးကျေးဇူးအချို့ကိုရှင်းပြပြီးရင် joovv နဲ့ blublox လိုနာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်တွေအကြောင်းပြောပြီးပစ္စည်းတစ်ခုကို ၀ ယ်တဲ့အခါဘာကိုရှာမလဲ။ ငါနင့်ကိုအသစ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမင်းရဲ့ကျန်းမာရေးနည်းပြပေါ့၊ အဆီပိုအာဟာရသိပ်သည်းမှုအစာစားတဲ့နေရာမှာဆောင်းပါးတွေတင်လိုက်ရင်မင်းဒီသီချင်းကိုကြိုက်ရင်လက်မလွှတ်လိုက်ပါ၊ မျှဝေပါ၊ subscribe လုပ်ပါ၊ နောက်လိုက်ပါ။ ငါနေ့တိုင်းပို့စ်အသစ်ကိုမျှဝေတဲ့ instagram, twitter နှင့် facebook ။ ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဆောင်းပါးမှာအနီရောင်အတိအကျဆိုတာဘာလဲ၊ ဘာကြောင့်အကျိုးရှိသလဲဆိုတာကိုစပြီးပြောမယ်၊ ပြီးတော့ငါတို့မှာရှိတဲ့မတူညီတဲ့အမှတ်တံဆိပ်အချို့အကြောင်းပြောမယ်။ စျေးကွက်နှင့်မည်သို့သူတို့ခွဲခြားနှိုင်းယှဉ်။
အကယ်၍ သင်သည်အနီရောင်ကုထုံးစက်ဝယ်ယူရန်စဉ်းစားနေပါက၊ အနီရောင်ကုထုံးသည်အနီရောင်ကုထုံးသည်သဘာဝအနီရောင်အလင်းအချို့လှိုင်းအလျားများနှင့်အနီအောက်ရောင်ခြည်အနီးတွင်အသုံးပြုသောကုသမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အနီရောင်အလင်းသည်အကျိုးရှိသည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည် acellular အဆင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးပွားစေပြီး ATP ATP ကိုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်ကိုထိန်းညှိပေးသည်။ အန်ဒီနိုအက်ဆစ်သုံးဖော့စဖိတ်အတွက်အတိုကောက်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆဲလ်များ၏စွမ်းအင်ဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့၏ဆဲလ်များ၏စွမ်းအင်ဖြစ်သည်၊ အနီရောင်ကုထုံးသည်ဆယ်စုနှစ်နှင့်ချီ။ ကြာလာသည်နှင့်အမျှအလင်းရောင်ကုထုံးသည်ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လွန်ခဲ့သောငါးနှစ်အတွင်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်အလှကုန်ပညာရှင်များကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက် elite အားကစားသမားများအသုံးပြုသောကြောင့်အာကာသအတွင်းအပင်များကိုကြီးထွားစေရန်သိပ္ပံပညာရှင်များအသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်အနီရောင်ကုထုံး၏ပစ္စည်းကိရိယာများသည်အများပြည်သူအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အနီရောင်အလင်းကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း - အနီရောင်ကုထုံး၏အားသာချက်ကိုယူရန်အားလုံးသည်အနီရောင်အရိပ်၏ရှေ့တွင်ရပ်တည်ရန် တစ်နေ့လျှင် ၅ မိနစ်မှ ၁၅ မိနစ် ht ကုထုံးဆိုင်ရာကိရိယာတစ်ခု၊ သင့်အရေပြားအပေါ်ယံမျက်နှာပြင်များများဖုံးအုပ်နိုင်လေ၊ သင်၏ဆဲလ်များသည်သဘာဝအလင်းကိုစုပ်ယူလေလေဖြစ်သည်။ သင့်ဆဲလ်များကိုအပြည့်အ ၀ အားသွင်းသည့်အခါအနီးအနားရှိအနီအောက်ရောင်ခြည်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်းတို့သည်ပိုကောင်းသောအနီရောင်အလင်းကိုပေးနိုင်သည်။ ယခုတွင်သင်သည်အနီရောင်ကုထုံး၏အကျိုးကျေးဇူးကိုမရရှိသေးပါ။ အနီရောင်ကုသမှု၏အကျိုးကျေးဇူးကိုမရရှိသေးသောလှိုင်းအလျားများ၌အလင်းကိုထုတ်လွှတ်ရန်လိုအပ်သည့်အနီရောင်အလင်းရောင်တိုင်းတွင် ၆၀၀ nm အလယ်အကွာအဝေးတွင်အနီရောင်အလင်းနှစ်မျိုးပါဝင်သည်။ သင့်မျက်လုံးကိုမမြင်နိုင်သည့်အပြင်အလယ်အလတ်တန်းစား 800 nm တွင်ရှိသောအနီအောက်ရောင်ခြည်အလင်းရောင်အနီးတွင်မြင်နိုင်သည်။ သင်၏အသားအရေသည်ကော်လာဂျင်ကိုစုပ်ယူပြီးအားဖြည့်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏အရေပြားကျန်းမာရေးအတွက်အကျိုးအရှိဆုံး Red Light Canreduce Wrinkles Reduce Canarruce Acarring Acne အရေပြားအခြေအနေ၊ psoriasis နှင့် eczema ကဲ့သို့သောအရေပြားအခြေအနေများကိုကူညီသည်။ အပေါ်ယံဖြစ်သောအရာအားလုံးသည်အလင်းရောင်ဖြင့်ကူညီနိုင်သည်။ အနီအောက်ရောင်ခြည်သည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာထိုးဖောက်နိုင်ပြီးကြွက်သားများပြန်လည်နာလန်ထူလာစေရန်နှင့်အဆစ်နာကျင်မှုကိုလျှော့ချပေးနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်ဒဏ်ရာတစ်ခုသို့မဟုတ်အရိုးကျိုးနေလျှင်သွေးလည်ပတ်မှုကိုတိုးတက်စေသည်၊ ၎င်းသည်ကုသမှုမြန်စေနိုင်သည်၊ ကြွက်သားများနှင့်အာရုံကြောဒဏ်ရာများကိုရရှိစေနိုင်သည်။
ကျွန်တော်မူလခရီးသွားအရွယ်အစား Joovv Go နဲ့စတင်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့လအနည်းငယ်အကြာမှာ Joovv Solo, ငါ့တံခါးနားမှာထိုင်နေတဲ့ပိုကြီးတဲ့ panel ကိုအဆင့်မြှင့်တင်လိုက်တယ်။ မကြာသေးမီကလည်း Theblublox ပျားအုံသည်ခရီးသွားလာခဲ့သည်။ အရွယ်အစားပစ်မှတ်ထား device ကို။ ငါနေ့စဉ်နေ့တိုင်းငါ့ joovv တစ်ကိုယ်တော်သုံးတယ်။ နံနက်ယံမှာအိပ်ရာပေါ်ကနိုးလာတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ငါ့အနီရောင်အလင်းရှေ့မှာရပ်ပြီးပိုမြန်တဲ့ကြွက်သားတစ်ခုအပါအ ၀ င်တွေ့ရတဲ့ကောင်းကျိုးအချို့ကိုတွေးတောဆင်ခြင်တဲ့အခါပထမဆုံးလုပ်တယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကြွက်သားတွေနာကျင်စေနိုင်တဲ့ခက်ခဲတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကိုလုပ်နိုင်ပါပြီ။ တစ်နေ့ငါ့အသားအရေကိုတိုးတက်စေခြင်းငှါကျွန်ုပ်မျက်နှာ၌ဝက်ခြံသို့မဟုတ်နှစ်လုံးရလျှင်၎င်းသည်ပိုမိုမြန်ဆန်သည်ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်နိုင်သည်။ ထို့နောက်အမာရွတ်သည်အနာရောဂါပျောက်ကင်းသွားသောကြောင့်မီးလောင်သည့်အခါကျွန်ုပ်ထံမှလာသည့်ငါ့လက်ဖျံ၌ဆိုးရွားသည့်အမာရွတ်ရှိသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် curling သံဖြင့်ပြုလုပ်သော်လည်းအနီရောင်ကုထုံးကိုစတင်ခဲ့သည့်အခါ၎င်းသည် ပိုမို၍ တံခါးပိတ်စိပ်လာပြီးယခုတွင်ငါသည်အနိုင်နိုင်တွေ့ရပြီးဒဏ်ရာများသည်ကျွန်ုပ်ကြွက်သားဆွဲသည့်အခါတိုင်းသို့မဟုတ်ဒူးနာ။ လျင်မြန်စွာပျောက်ကင်းသွားသောအခါတိုင်းပျောက်ကင်းသွားသည်။ အခုသူတို့ပေါ်ထွက်လာတာတွေအများကြီးရှိလို့မတူညီတဲ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အချို့အကြောင်းအခုပြောကြရအောင်။
Joovv သည် 2016 ခုနှစ်တွင်စားသုံးသူစျေးကွက်သို့အလင်းကုထုံးကိုပထမဆုံးသယ်ဆောင်လာသည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်အစောပိုင်းကပြောကြားခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်၌ joovv go ရှိသည့် joovv go နှင့် joovv တစ်ကိုယ်တော်ယခု joovv solo သည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအနီရောင်နှစ်မျိုးလုံးရှိသည်။ အနီးအနားရှိအနီအောက်ရောင်ခြည်အလင်းနှင့်သင်တစ် ဦး ချင်းစီကိုသုံးနိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ တစ်ချိန်တည်း၌ဖြစ်စေ juve go သည်ပစ်မှတ်ထားသည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤပုံစံဖြင့်၎င်းကိုအနီရောင်သို့မဟုတ်အနီအောက်ရောင်ခြည်ဖြင့်သာရနိုင်သည်၊ အကောင်းဆုံးကတော့အားသာချက်တွေအားလုံးကို Device နှစ်ခုမလိုဘဲအသုံးပြုချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီအရွယ်အစားကသင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာသင်ပစ်မှတ်ထားချင်တဲ့နေရာတစ်ခုရှိမယ်ဆိုရင်သင်ကုသချင်တဲ့အမာရွတ်ရှိတယ်ဆိုပါစို့။ တစ်နေ့လျှင် ၁၅ မိနစ်ခန့်မီးထွန်းပါ။ Joovv ပေါ်တွင်အေးဆေးစွာနေရန်လိုအပ်သည်မှာ Go မှလွဲ၍ သူတို့၏စက်ပစ္စည်းအားလုံးသည် modular ဒီဇိုင်း ရှိ၍ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် panel တစ်ခုဖြင့်စတင်ပြီးထပ်ထည့်နိုင်သည်။ အချိန်ပို။ ထို့နောက် Blublox အကြောင်းပြောကြစို့။ သူတို့မကြာသေးမီကသူတို့၏ Hive ထုတ်ကုန်နှင့်၎င်းသည် Juve Go နှင့်ဆင်တူသည်၊ သို့သော်မည်သည့်ကိရိယာကို ၀ ယ်ယူရမည်ကိုမသေချာလျှင်၊ ထိုကိရိယာနှစ်ခုလုံးသည်အကြမ်းအားဖြင့်တူညီပြီးအလေးချိန်နှင့်ဘက်ထရီသက်တမ်းတူသည်။ Joovv Go သို့၎င်းသည် blublox ပျားအုံနှင့်အသုံးပြုမှု ၆ ခုမှ ၇ ခုအထိကြာသည်။
timer မရှိပါကထို့ကြောင့်၎င်းကိုသင်ဖွင့်သောအခါ၎င်းသည်ဆက်လက်တည်ရှိပြီးသင် blubloxhive ဖြင့်ပစ္စည်းကိုသင်ဝယ်ပါကအနီရောင်သို့မဟုတ်နီပေါအနီအောက်ရောင်ခြည်အတွက် joovv ဖြင့်အားသွင်း။ တစ်နာရီခွဲခွဲရနိုင်သည်။ နှစ်မျိုးလုံးကိုတူညီတဲ့ပစ္စည်းနှစ်ခုလုံးမှာ Joovv go က ၁၄ ရက်ရုံးတင်စစ်ဆေးပြီးနောက်တစ်နှစ်မှာငွေပြန်အမ်းငွေအာမခံချက်နဲ့တစ်နှစ်ကန့်သတ်ချက်ရှိတဲ့အာမခံချက်ပေးရမယ်။ ပြီးတော့တစ်နှစ်ထုတ်လုပ်သူရဲ့အာမခံချက်ကတော့ joovv go ကဒေါ်လာ ၂၉၅ ကုန်ကျမှာဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်းပို့ဆောင်မှုရရှိနိုင်ပါတယ်။ blublox-hive က ၉၀ ဒေါ်လာ ၂၉၁ ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာအခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ blovox က joovv ပျောက်ဆုံးနေသောနေရာအားလုံးကိုသတိပြုမိပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောစက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရန်၎င်းတို့ကိုသုံးသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ခေါက်နေခြင်းမဟုတ်ပါ သင်နှင့်အတူသွားသော Juve အမှတ်တံဆိပ်အားလုံးတွင်သင်ထုတ်လွှတ်လိုက်သောလှိုင်းအလျားများသည်မှန်မှန်ကန်ကန်ရှိသည်ကိုသေချာအောင်လုပ်ရန်လိုသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုတွင်ထိုနေရာ၌အမည်များမရှိသောစျေးသက်သာသည့်အနီရောင်အလင်းရောင်ကုထုံးထုတ်ကုန်များရှိသည်။ ကောင်းသောသဘောတူညီချက်, ဒါပေမယ့်အဖြစ်မှန်အတွက် ju မင်းဒါကိုသုံးနေတာလား။ ယောက်ျားတွေ၊ မင်းအတွက်အသုံးဝင်မှာမဟုတ်တဲ့သာမန်အနီရောင်မီးသီးများ၊ ဒီနေ့ငါအတွက်တော့ငါ့အတွက်ကျန်သေးတယ်။ ဤဆောင်းပါးသည်သင်အကူအညီလိုအပ်ကြောင်းသင်မျှော်လင့်ပါသည်။ ငါ Joovv နှင့် Blublox အတွက်အထူးနှုန်းများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အောက်ဖော်ပြပါဖော်ပြချက်အကွက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောမှတ်ချက်များအပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်နှင့် Red Light ကုထုံးကိုကြိုးစားရှာဖွေရသည့်အကြောင်းရင်းဤဆောင်းပါးကိုကြိုက်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်သည်အပြာရောင်မီးနှင့်ငါ့ဆောင်းပါးကိုကြိုက်နှစ်သက်နိုင်ပြီး၎င်းသည်မည်သို့ဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့ငါ့ရဲ့နောက်ဆုံးတင်ပို့ချက်အတိုင်းငါလိုက်ချင်မယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့ keto နဲ့ carnivore diet နည်းပြနည်းစနစ်တွေကိုလေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့ကျန်းမာရေးကိုအကျိုးပြုပြီးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း i မှာတွေ့နိုင်တယ်။ နောက်တစ်ခါတွေ့မယ်
FCC သည်အနီရောင်အလင်းပြစနစ်ကိုမကြာမီပြန်လည်အနားယူရန်စီစဉ်သည်။ ယခုသင်သည်သင်၏အနီရောင်အလင်းအခြေအနေကိုကြည့်ရှုခြင်း၊ ငွေတောင်းခံလွှာများဖွင့်ခြင်းနှင့်အသစ်ပြင်ဆင်ထားသောကော်မရှင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းစနစ် (CORES) မှတစ်ဆင့်ငွေပေးချေနိုင်သည်။ CORES ကိုသွားရန်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်လက်ရှိ Red Light Display စနစ်ကိုဆက်လက်အသုံးပြုလိုပါကဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။
FCC သည်အနီရောင်အလင်းပြစနစ်ကိုမကြာမီပြန်လည်အနားယူရန်စီစဉ်သည်။ ယခုသင်သည်သင်၏အနီရောင်အလင်းအခြေအနေကိုကြည့်ရှုခြင်း၊ ငွေတောင်းခံလွှာများဖွင့်ခြင်းနှင့်အသစ်ပြင်ဆင်ထားသောကော်မရှင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းစနစ် (CORES) မှတစ်ဆင့်ငွေပေးချေနိုင်သည်။ CORES ကိုသွားရန်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။
Red Light စည်းမျဉ်းကိုဖက်ဒရယ်ဆက်သွယ်ရေးကော်မရှင်၏ကြွေးမြီစုဆောင်းမှုတိုးတက်ရေးအက်ဥပဒေကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ကြိုးပမ်းမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်အတည်ပြုခဲ့သည်။ ကော်မရှင်အနေဖြင့် FCCare မှကော်မရှင်သို့ပေးဆပ်ထားသောကြွေးမြီများမှ FCCare မှလိုင်စင်များသို့မဟုတ်အခြားအကျိုးခံစားခွင့်များတောင်းခံသည့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ။